Baaritaan lugu sameeyn doono dadyowga aan dib loogu celin karin dalalkii ay ka yimaadeen | Somaliska
Dowladda Iswiidhan ayaa sameeyneysa baaritaan la xirriira magangalyo doonka dalkeeda ku sugan ee ay adag tahay in dalka laga musaafiriyo.
Dowladda ayaa magacowday koox baarta sababaha keenaya in dadkaasi dalka loogu musaafurin karin. Kooxdan ayaa lugu wadaa ineey eegaan sidda lugu yareyn karo dadyowga aan kiisaskooda la garaneyn, iyo wixii laga yeeli lahaa. Dadkan ayaa waxeey yihiin kuwo horey loo siiyey diidmo ah ineey dalkaan joogaan.
Waxaa la rusan yahay ineey jiraan sababo keenaya inaanu fulin go’aanka dalka looga saaray, tusaale ahaan dalalkii ay ka yimaadeen oo laga diiday in dib loogu soo celiyo ama aan la aqoon halka ay asal ahaan ka yimaadeen. Waxaa sidoo kale jira xaaladdo caafimaad iyo dhowrista xaquuqda aadanaha oo iyagana adkeeyneya in dadkaasi dalka laga saaro.
Tirro ahaan waxaa dadkaasi lugu qisaay ineey gaarayaan inta u dhaxeeysa 20.000- 30.00, kuwaas oo laanta socdaalka ay u diiday ineey siiso sharciyada daganaanshaha Iswiidhan.
Hogaamiyaha kooxdan oo ah Anna Lundberg oo macalimad culuumta xaquuqul insaanka ka dhigta jaamacadda Malmä ee koonfurta Iswiidhan, ayaa looga fadhiyaa ineey soo aruuriso xog dhinaca qaanuunka ah iyo hindsiyaal lugu dhimayo tiradaasi xad dhaafka ee dadkaasi aan dalkaga saari karin arrimmo is biirsaday dartood.
Anna ayaa laga sugayaa bisha sibteembar ee sanadka soo socda ineey soo bandhigto baaritaankeeda howshan. Mar ay u hadleeysay idaacadda raadiyo Iswiidhan qeybteeda wararka u faafisa ee Ekot, ayey sheegtay Anna Lundberg in daraasadaha arrintaasi la xirriirta ee ay maalin walba sameeyso ay ku aragto dhibaatooyinka ku heereysan kiisaska dadkaasi iyo cawaaqibka ay la kulmaan.
November 4, 2016 at 20:37
November 6, 2016 at 07:40